closeout(closeout) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । गत आइतबार सनी सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४२) मा दुई नयाँ महिला लगानीकर्ता हतारिँदै भित्र पसे। त्यसरी हतारिँदै आउनुको कारण थियो, उनीहरुले बेचेको जीवन विकास लघुवित्तको सेयर ईडीआईएसमा नदेखिनु। ती महिला लगानीकर्ताले मंगलबार सेयर बेचेका थिए। ईडीआईएस बुधबार ३ बजेसम्म गरिसक्नुपर्ने थियो। बिहीबार तीज पर्वका...
सेयर बजारमा क्लोजआउटको समस्या विकराल बन्दै, यस्ता छन् कारण
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय सेयर बजारमा उछाल आएसँगै क्लोजआउटको समस्या पनि ह्वात्तै बढेको पाइन्छ। कोरोना महामारीबीच अन्य क्षेत्र खासै नचलेका कारण सेयर बजारमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ। सोही कारण बजारमा छोटो समयमै उछाल आएको छ। कारोबार रकम पनि ह्वात्तै बढेको छ। अहिले बजार पूर्ण रुपमा प्रविधिमैत्री पनि बनेको छ। ९० प्रतिशत...
क्लोजआउटको जरिवानाबाट कसरी जोगिने ? यस्ता छन् प्रक्रिया
काठमाण्डौ । धितोपत्र बिक्री गरेपछि समयमै डीआईएस तथा ईडीआइएस नगर्दा क्लोजआउट (सेयर सर्टेज) को समस्या यथावत छ। सीडीएसए एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)का अनुसार हाल दैनिक १०० हाराहारी क्लोजआउट पर्ने गरेको छ। जसबापत जरिवाना मात्रै २० लाख रुपैयाँ हाराहारी लगानीकर्ताले तिर्दै आउनुपरेको छ। सेयर बिक्रीपश्चात डीआईएस स्लिप सम्बन्धित...
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबारको राफसाफ चक्र छोटिँदा पनि क्लोजआउटको संख्या पुरानै तथ्यांक हाराहारीमा भएको छ। गत आइतबारदेखि लागू भएको टी प्लस टु अर्थात् दुई कार्यदिनभित्रै धितोपत्र कारोबारको राफसाफ ३ कार्यदिनबाट छोटिँदा क्लोजआउट बढ्ने अनुमानविपरीत पुरानै लयमा क्लोजआउट पर्न थालेको हो। गत आइतबार सम्पन्न धितोपत्र कारोबारको राफसाफ...
काठमाण्डौ । पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणालीमा डिम्याट इन्ट्रीग्रेसन भएतापनि लगानीकर्ताहरु स्वयम्कै कारण क्लोजआउटको समस्या भने अहिले पनि हल भइसकेको छैन । सिस्टमले डिम्याट खाता चेक गरी सेयर बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था भइरहँदा लगानीकर्ताका कतिपय हेल्चेक्र्यार्ईँ र लापरवाहीले क्लोजआउटमा जरीवानाको भागिदार बन्नु परिरहेको हो । सेयर...